Ama-Apron → Izingubo zokusebenza • Imishini efekethisiwe yekhompyutha ye-P & M
Janawari umsebenzi ngumkhiqizo owenzelwe imisebenzi ezimbonini ezahlukahlukene. Isetshenziselwa ukuvikela izingubo ekungcoleni noma ekulimaleni. Usayizi wazo ungowendawo yonke, kepha ungalungiswa ngemichilo.
Ngaphezu kwemikhiqizo evuselelekayo, siphinde sibe namaphinifa alahlwayo apakishwe izingcezu eziyi-10 noma eziyi-100, ikakhulukazi asetshenziswa ku-gastronomy. Esitolo uzothola amamodeli enziwe ngezinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezifana nokotini osindayo, i-polyester, i-raber, i-polypropylene nezinye, kuye ngendawo oya kuyo.
Izinto ezisetshenzisiwe zisezingeni eliphakeme futhi zinezakhiwo ezengeziwe esimweni samaphinifa abangochwepheshe. Ingxenye enkulu yalo yayenziwe ngezinto ezigezeka kalula. Siphakela, phakathi kokunye, izimonyo, indawo yokudlela kanye nezindawo zokuhlabela.
Siphinde sinikeze ama-aprons esigabeni sezingubo zokusebenza ngama-aprons izingane kubathandi abasha bezivivinyo zokupheka.
Ukunikezwa kwama-aprons omsebenzi kufaka:
yenziwe nge-polypropylene / PE / PVC / Tyvek,
Okuthandwa kakhulu okunikezwayo ngama-aprons ukuvikela ezinikele embonini yokuphekela nezimonyo. Siphinde sinikeze okuthiwa ama-aprons - amafroni amafushane. Izingubo zenziwe ngokotini kanye nezinhlanganisela zikakotini nezinto zokwenziwa, okuvumela ukususwa kalula kwamabala ekudleni noma ezimonyo, phakathi kwabanye. Imibala yezindwangu ezisetshenziselwa ama-aprons ingeza isiphetho esihle.
Kulezi zimboni, i-aesthetics nesithombe kubaluleke kakhulu ngoba abasebenzi banokuxhumana okuningi namakhasimende - imikhiqizo yethu izobenza bazizwe benobuchwepheshe nobuhle. Inketho eyengeziwe imifekethiso ilogo izokuvumela ukuthi ugqame emncintiswaneni futhi unamathele kangcono kwimemori yomamukeli.
Amadivayisi akhethekile wokunquma
Izindwangu zensimbi ezisezingeni eliphakeme anti-ukusika enzelwe ikakhulukazi imboni yokudla. Ziyingxenye yemishini yesisebenzi esenza umsebenzi ohlobene nokuphatha ummese oqondiswe emzimbeni. Ama-aproni enziwe ngensimbi engenasici esezingeni eliphakeme nensimbi yensimbi enobubanzi obungu-7 mm, ehlangabezana nezidingo ze-EN13998 (ileveli 2). Izinga livumela ukusetshenziswa ezimweni zokunakekelwa okukhethekile. Ukumelana okuphezulu kwalolu daba kuvimbela ukubhoboza emzimbeni.
Ama-aprons afanele ukusebenza ohlelweni lwe-HACCP. Zingasetshenziselwa ukucubungula amapulasitiki nesikhumba, kanye nokwehlukaniswa kwenyama namathambo. Umenzi wenza isiqiniseko sokuthi iphinifa, yize linempahla yalo, likhanya ngangokunokwenzeka futhi alinciphisi inkululeko yokuhamba.
Ama-Aproni enziwe i-polypropylene, i-PE, i-PVC ne-tyvek Zenzelwe izimo lapho kunezinto ezingalimaza izingubo nesikhumba ngenxa yokuthintana nezinto ezifana namakhemikhali noma izinto ezivuthayo. Sinikeza ama-aprons elebhu elenziwe nge-polypropylene enekhola ukuvikela intamo, kanye namamodeli enziwe nge-microporous PE laminate ehloselwe ukuvikelwa lapho isebenza ngezinto eziyingozi.
Phakathi kwama-aprons avikelayo, kukhona nama-aprons enjoloba e-PVC, afaneleke kakhulu ekusebenzeni esitolo sasebhusha ukucubungula inyama engadingi ummese okhomba emzimbeni. Ukuqina okuvikela izingubo kuqinisekiswa ngento eyenziwe ngomlomo.
Sinikeza ama-apron ukusebenza izinkampani ezihlonishwayo iLeber & Hollman neReis. Izinhlobo esizithengisile ziyatholakala ngemikhono emide futhi emifushane. Kunconywa ama-apron enziwe ngenhlanganisela yezindwangu ze-polyester nokotini osindayo emsebenzini wasekhishini, lapho izingubo zivezwa khona ukungcola okusindayo nokuvamile, okudinga ukuwashwa kaningi emazingeni okushisa aphezulu, ngisho kuze kufike kuma-95 degrees Celsius, ngenkathi kugcinwa ubuhle bezingubo.
Ngaphezu kwekhishi, ama-apron afanele ukusebenza endaweni yokugcina impahla, ekukhiqizeni, emhlanganweni noma kumalabhorethri. Idizayini yanamuhla ivumela ukubukeka okukhangayo, futhi imininingwane eqondile izosetshenziswa isikhathi eside.
ama-aprons asebenzayoizingubo ezimhlophe zomsebenziamabhantshi womsebenzi wabesifazaneaprons zomsebenziumsebenzi aprons Allegroukotoni umsebenzi wezinguboamabhantshi womsebenzi wabesifazaneaprons umsebenzi abesifazane Allegroaprons zomsebenzi wezindlu zokuhlanzaumsebenzi aprons maciejama-aprons okusebenza amadodaama-aprons okusebenzela amadoda i-etigroumenzi we-aprons osebenzayoIzitayela zomsebenzi wesitayelaukusebenza aprons wrocławizingubo zokugqoka zokusebenza kwama-aproni abesifazane